के तपाँई डेटिङ जादै हुनुन्छ?यि कुरा ध्यानमा राख्नुहोस पक्का सफल हुन्छ – Samacharpati Samacharpati के तपाँई डेटिङ जादै हुनुन्छ?यि कुरा ध्यानमा राख्नुहोस पक्का सफल हुन्छ – Samacharpati
१ भेटको क्रममा के कुरा गर्ने ?
कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिसँग बाहिर जान असहज महसुस हुनु आफैँमा स्वाभाविक कुरा हो । यस अप्ठ्यारोका कारण धेरै मानिसहरू डेटिङ जान चाहँदैनन् । तर सोच्नुहोस् त जुन प्रश्न तपाईंको दिमागमा चल्दै छ, यो अर्कोको दिमागमा पनि भएको नहोला र रु यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंको साथी पनि त उति नै डराएको हुन सक्छ नि होइन र रु गणितमा हामीले पढ्यौं कि माइनस र माइनस प्लस हुन्छु । त्यही सूत्र यहाँ पनि लागू गर्नुहोस्, । त्यसैले चिन्ता छोड्नुहोस् र डेटिङको लागि हुन्छ भन्नुहोस् ।हामी सबै चाहन्छौं कि मानिसहरूले हामीलाई मन पराओस्।
२अस्वीकृत हुने डर
डेटिङका क्रममा पनि प्रत्येक केटा वा केटीले आफू अघि नै मान्छेलाई मनपराइरहेको हुन्छ ।कसैलाई भेट्नुभन्दा पहिले हामी सोच्न थाल्छौं कि यदि उसले हामीलाई मन पराएन भने के हुन्छ रु तर यस प्रश्नको व्यावहारिक हिसाबले सोच्नुहोस् ।
३सबै कुरा राम्रो हुन्छ कि भन्ने
४ प्रतिबद्धताको डर
यस किसिमको डर सामान्यतया पुरुषहरूमा भन्दा महिलामा बढी देखिन्छ। महिलाहरूलाई लाग्छ कि डेटिङको अर्को चरणमा प्रतिबद्ध सम्बन्धको सुधार हुनुपर्छ। त्यसो त्यस्तो नहुने भयो भने महिलाहरू दोस्रो डेटिङबाट टाढा भाग्ने गर्छन् । हेर्नुहोस्, कसैसँग डेटिङ गर्नुको मतलब यो होइन कि तपाईं भोलि उसैसँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले आफैंलाई र उसलाई पनि समय दिनैपर्छ । प्रतिबद्ध सम्बन्धको थालनी गर्नुअघि हामीले हाम्रा अपेक्षाहरू र भविष्यका योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यदि सबै कुरा ठीक देखिन्छ भने प्रतिबद्धतादेखि किन डराउनुपर्ने?
५सही व्यक्ति नपाएकोमा डर
यो डरको अर्को रूप हो प्रत्येकचोटि जब तपाईं फरक व्यक्तिसँग डेटिङमा जानुहुन्छ भने त झनै तपाईंले उसलाई चिन्न सक्नुहुन्न । जसको कारणले तपाईं‌ डेटको अवधारणाबाट डराउन शुरू गर्नुभयो। हेर्नुहोस् यो जेन्युइन डर हो, तर जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि, तपाईंले यसलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई मनपराउन जबरजस्ती नगर्नुहोस्। कुनै पनि कुरालाई मनपराउन समय लाग्न सक्छ । राम्रो चीज प्राप्त गर्नका लागि केही समय लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।